Kwethulwe iLexus ES entsha | Isolezwe
Kwethulwe iLexus ES entsha
ezezimoto / 14 October 2018, 11:41am / FANELESIBONGE BENGU
KUNEZINKAMPANI ezivele zingafuni ukuphumela obala ngokuthi yini ezifuna ukuyizuza ngemoto ezisuke ziyikhiphe ngaleso sikhathi.
Ezinye nokho, njengeLexus, zivele zingapholisi maseko zicacise uma zibuzwa. Ngesikhathi sithamele ukwethulwa kweLexus ES entsha eKapa ngeledlule, iziphathimandla ziphumele obala ngokuthi zingajabula uma kungathengwa ama-ES aphakathi kuka-30 no-35 ngenyanga.
Uma uyibheka le-ES entsha uyabona ukuthi ziningi izimpawu zokuthi lesi sifiso sabo sizofezeka yize umnotho ushubile futhi namakhasimende esekhonze ukuthenga izimoto eziphakeme.
Le moto ihlukene ngezinhlobo ezimbili okuyi-ES 250 EX kanjalo ne-ES 300h SE. Bayenze yathi ukuvuleka uma uyiqhathanisa nendala njengoba ubude bunyuswe ngo-65 mm bayehlisa ngo-5mm kwathi ububanzi bakhushulwa ngo-45 mm. Lokhu kwenze ne-wheelbase yakhuphuka ngo-50mm.
Ngaphandle ibukeka iyinhle futhi iyaheha. I-ES 250 EX ishaya ngamarimu angu-17 inch kuthi i-ES 300h SE yona ibe nangu-18 inch futhi ngemuva ine spoiler.
Okhakhayini zombili zine “stamkokoko”.
Iphinde ibe nemibala eyisishiyagalolunye okukhona kuyo nemisha o-Ice Ecru no-Olive Green.
Uma ungena ngaphakathi okufike kwangigqamela wubukhulu bayo.
Yize inkulu kodwa bengingathanda ukube isihlalo somshayeli sikwazi ukuhlala size siyoshaya emuva, okuyindlela engihlala ngayo ukuze ngikhululeke njengoba ngimude. Esomgibeli eseceleni sona besihlehla, okwedlula esomshayeli, uhlale unabe.
Lezi zihlalo ziyisikhumba futhi zihlukene ngemibala ozikhethela wena. Ezangaphambiili ziyafudumala kanti kwi-ES 300h SE nezangemuva nazo ziyashisa.
I-ES igabe ngobuchwepheshe besimanje ukuze ihambisane nesikhathi. Phakathi kwezinto efika nazo kubalwa iscreen phakathi nendawo lapho ubona khona ingemuva uma uhlehla, inkombandlela kwi-ES 300h SE, ukudlala umsakazo nokune. Ngenxa yokuthi ilawulwa ngeRemote Touch touchpad eceleni kwegiya, bekungayenza ibukeke kangcono ukube abawafakanga amabhathini okukhetha umsakazo, ingoma oyidlalayo kanjalo nokukhetha ukuthi ufuna ukudlala umculo okuphi.
Ezinye izinto enazo zihlanganisa iHead-Up Display kwihybrid kanjalo ne adaptive cruise control (kwi-ES 250 yicruise control eyejwayelekile) nokunye.
KwaLexus bagaxe i-ES 250 injini entsha engu-2.5 litre four-cylinder kaphethroli kanjalo no gearbox omusha oyi eight-speed Direct Shift automatic transmission. Ifuqa amandla angu-152 kW netorque engu-243 Nm bathi ngebanga lika-100km/* isebenzisa amalitha kaphethroli angu-6.6.
Ngesikhathi siyivivinya ibizwakala ishesha ngokwanele yize kungesiyo imoto egijimayo. Lokhu kufakazelwa nawukuthi ukusuka ku-0 iye ku-100km/h kuyithatha imizuzwana engu-9.1 kanti ijubanje layo elikhulu ngu-210km/h .
Uma uthanda futhi uyakwazi ukuzishintshela wena kuma-paddle shift ngemuva kwesiteringi.
I-ES 300h nayo inenjini engu-2.5 litre enamandla afinyelela ku-160 kW. Ngenxa yokuthi iyi-hybrid okusho ukuthi ibuye ihambe ngebhethri, iyonga kuphethroli ngoba bathi isebenzisa amalitha angu-4.6 ngebanga lika-100km. Ukusuka ku-0 iye ku-100km/h kuyithatha imizuzwana engu-4.6 kanti ijubane elikhulu limiswe ku-180km/h .
Esikhathini esincane engisitholile ngiyishayela ngizwe umsinjwana womoya. Lokhu kungenze ngadlala ingoma nokuyilapho ngiqaphele khona ukukhala kahle kwezipikha ezingu-17 zeMark Levinson.
Okunye engikuqaphelile okwenziwe wukuthi mhlawumbe ukuthi bengingakayijwayeli, ukuthamba kwesiteringi. Ngisithanda sithe ukuqina kancane, ikakhulukazi uma uyifake kuSport ukuze uzojika kahle emakhoneni.
Yize kunjalo ibilibamba ikhona ngaphandle kwenkinga yize kuwuhuntshu.
Emgwaqweni intofontofo kwazise inama-shocks amasha.
Ngingaze ngikhohlwe, ngaphandle kukaSport uyakwazi ukuyifaka ku-ECO nokuNormal, kuya ngawe.
Ngakwezokuphepha ifika nenqwaba yezinto engingabala kuzo ama-airbag angu-10. Ngaphezu kwalokhu ihybrid inePre-Crash System eyenza ukuthi izwe uma kukhona izimoto ezizayo nabantu bese iyabika. Okunye yi-Adaptive Cruise Control, iyabika uma uphuma emzileni, iyazicisha u-bright uma kukhona izimoto ezizayo futhi iveza umzimba wonke wemoto uma uhlehla.
Ngicabanga ukuthi i-ES izokwenza kahle emakethe ikakhulukazi ngoba ngenani layo uthola izinto eziningi ngaphandle kokunezezela imali.Ukuqhubeka nokunyuka kwenani likaphethroli kungenzeka kuhehe amakhasimende kwihybrid njengoba yona yonga.
Lexus ES 250 EX - R593,300
Lexus ES 300h SE - R843,800
Iphuma ne warranty neFull Maintenance Plan yeminyaka eyisikhombisa noma u-105 000 km. Kumele iye kwisevisi ngemuva kokuhamba u-15 000 km noma kanye ngonyaka.